जनमत, अब कुन प्रधानमन्त्री हुदाँ राम्रो होला ? … प्रतिक्रिया दिनुस – Taja Khawar
जनमत, अब कुन प्रधानमन्त्री हुदाँ राम्रो होला ? … प्रतिक्रिया दिनुस
प्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख ३०, २०७८ समय: ११:००:२३
काठमाडौं देशको राजनितीमा यतिबेला खटपट चलेको छ।हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत गुमाएर राजिनामा दिएका छन् ।त्यसैकारण अब देशको प्रधानमन्त्री को होला भनेर जतासुकै चर्चा परिचर्चा छ।साच्चै भन्नुपर्दा अब को प्रधानमन्त्री को होला त ?
“मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा उपचाररत चौलागाईँको मंगलबार राति निधन भएको हो । गत साता कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए ।”के अबको प्रधानमन्त्री जनताले खोजे जस्तै ,जनताको गुनासो सुन्ने “अब के गर्ने भन्नेमा ठाकुर पक्ष प्रथम अध्यक्ष ठाकुर नै भएकाले उनको हस्ताक्षर आधिकारिक हुने बताउँदै आएको छ
यादव पक्ष केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय सबैले मान्नु पर्ने अडान राख्दै आएको छ। ”र देशको विकासका काममा ध्यान दिने खालको आउछन् त ?“दोलखा प्रदेश सभा (ख) बाट निर्वाचित भएका चौलागाईँ यसअघि प्रतिनिधिसभा सांसद समेत थिए । चौलागाईँ युवा संघका पूर्वअध्यक्ष र पछि पार्टीको वागमती अञ्चल कमिटीको ईन्चार्ज समेत बनेका थिए ।
चौलागाईँका श्रीमति सहित एक छोरा र दुई छोरी छन् ।” “ठाकुरले अहिलेको अवस्थामा सरकार बनाउने गतिविधिमा संलग्न हुनु मधेशको भावनाविरोधी काम भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। उनले जसपा सरकार केन्द्रित नभई मुद्दा केन्द्रित रहेको समेत बताएका छन्।
मुद्दा सम्बोधन नै जसपा नेपालको मूल उद्देश्य भएकाले अहिले वैकल्पिक सरकारमा सहभागी हुनुभनेको मधेश आन्दोलनको मर्म र भावना प्रतिकूल भएको उनको ठहर छ। उनले सरकारमा सहभागी हुँदा झन् अस्थिरता हुने र एजेण्डा सम्बोधनको कार्य अनिश्चिततातर्फ धकेलिने स्पष्ट पारेका छन्। ”
के छ तपाईंको प्रतिक्रिया ?“मंगलबार कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादीका अध्यक्ष दाहाल र जसपाका नेता यादव वैकल्पिक सरकार बनाउने अभियानमा लागिरहे। सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा पनि जसपा विभाजित देखियो।
ठाकुर–महतो पक्षका १५ सांसद तटस्थ रहे। भट्टराई–यादव खेमाका १५ सांसदले विपक्षमा मतदान गरे। ठाकुर र यादवका मन्तव्य पनि त्यहीअनुसार आएका थिए।”“अरगरियाले पार्टीका माग सम्बोधन हुन थालेका बेला यसलाई नै दबाब दिनको साटो सत्तामोहमा अर्को पक्ष लागेर मधेशका मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोजेको आरोप लगाए।
‘जससम्म हाम्रा माग पूरा हुँदैनन्, तबसम्म पक्ष विपक्षमा लाग्नु हुँदैन भनेर हामी विश्वासको मतमा तटस्थ बस्यौं,’ उनले भने, ‘हो, प्रधानमन्त्री हाम्रा माग पूरा गर्न लाग्नुभएको छ। ११८ जनाको मुद्दा फिर्ता पनि भएको छ। अन्य मागका विषयमा प्रक्रिया सुरुवात भएको छ।
यादव पक्षका नेता इस्तियाक राईले भने बहुमतको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताए। ‘सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णय गर्ने भन्ने विधानमा व्यवस्था छ। सर्वसम्मत नभएमा कार्यकारिणीको बहुमतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले कार्यकारिणीमा बहुमत पुर्‍याउनुहुन्छ भने हामी मान्छौं। सबैले मान्नुपर्छ।’
Last Updated on: May 13th, 2021 at 11:00 am